Kuisirwa Mirayiridzo yeFlange kana Flange Adapter
Flange adapteri (Flange adapter, yakamonerwa flange, flange) inogona kushandiswa kune chinongedzo chinongedzo pakati peiyo grooved pombi nemidziyo & mavhavha ane flanges. Iyo dhayamita, nzvimbo uye kuyerwa kweiyo bhaudhi gomba paFlange adapter inoenderana nemabhaudhi epasi rose zviyero (G ...
Kuisirwa kuraira kweMechanical Tees / Muchinjikwa, Mativi Ekubuda (Yakakungurutswa mhando uye Threaded mhando)
Kurutivi rwekunze (muchinjiko muchinjikwa) inogona kushandiswa zvakananga kubatanidza mapaipi ebazi nepombi huru yesimbi. Chekutanga, kuvhura gomba nemuchina unocheka gomba pane pombi dzesimbi, uye clip chikamu chekubuda (muchinjiko muchinjikwa) mugomba, rakatenderedzwa rakanamwa nemhete dzegasket. Kurutivi kuburitsa (mechan ...
Kuisirwa Kuraira Kune Rigid & Flexible Coupling
Isa gasket muhomwe ye gasket. Dhinda gasket parutivi rwakazara wedenderedzwa kuti uve nechokwadi chekuti inogara zvizere muhomwe ye gasket. Usashambadza GASKET. 2.Insert bhaudhi mune nzira yekubuditsa dzimba uye yepazasi pekugara, uye tambanudza nati zvakasununguka pane bhaudhi (nati inofanira kunge ichimhanya ne ...
Grooved Fittings Nhanganyaya
Grooved Fittings Nhanganyaya Chinyorwa: ASTM A536 GRADE 65-45-12, QT450-10 Tambo: ASME b1.20.1, ISO 7-1, GB7306 Saizi Inowanikwa: 1 ″ - 12 ″ Surface Kurapa: P: Painted E: Electroplated S: Epoxy G: Hot-dip kwakakurudzira Inowanikwa Ruvara: Tsvuku, orenji, Bhuruu, Grey, Chena Chigadzirwa Applica ...
Zvakanakira EN877 cast iron pombi uye fittings
Lining nyowani yepombi yemukati yezvinhu zvakagadziridzwa HPS 2000 Yakanakisa kuchengetedza ngura yezvakagadzirwa nekuda kwekatiresresis kupfeka (mukati nekunze). Zvakanyatso rongedzwa zvakakodzera masisitimu mune epamusoro mhando. Kukwirira kwakasimba zvinopfuura zvinodikanwa zvinotsanangurwa muEN877. Hig ...
FLANGE JOINT Pipe uye FITTINGS INSTALLATION KURAIRIRA
Zvekukurumidza kutaura, zvakakosha zveakanakisa ekuisa maitiro zvakasimbiswa pazasi: 1. Ita shuwa kuti nzvimbo dzekuisa chisimbiso dzakachena, dzakaoma uye hadzina mafuta. - Tarisa mhando yeflange uye gasket, simbisa kubvisa chero guruva uye hutsinye. - Rongedza mapaipi epombi. - Siya nzvimbo betwee ...
TYTON PAMUSORO PAKAPI PASI YEMAUNGANO (2)
6. Iva nechokwadi chekuti mugumo wakajeka wakaputirwa; mativi akaenzana kana akapinza anogona kukuvadza kana kubvisa gasket uye kukonzera kubuda. Mugumo wepombi pombi inofanirwa kucheneswa pazvinhu zvese zvekunze kunze kubva kumagumo kusvika kumitsetse. Zvinhu zvakaomeswa zvinogona kunamatira pombi munguva inotonhora uye inofanira kubviswa ...
TYTON JOINT PIPE KUSANGANISIRA KURANGIRA (1)
Zvese zvekune dzimwe nyika zviri musoketi zvinofanirwa kubviswa, kureva, matope, jecha, zvigadziri, mavhu, hurungudo, marara, zvinhu zvakaomeswa nechando, nezvimwe. Chigaro chegasket chinofanira kuongororwa zvakaringana kuve nechokwadi chekuti chakachena. Nyaya yekunze kune chigaro chegasket inogona kukonzeresa. Usazora mukati mebhero. Iyo gasi ...
Kazhinji, ductile iron fittings ndeye dhizaini akafanana neaya e grey iron fittings uye magumo awo ari flanged kana zvakanyanya, socket. Iwo makuru echimakanika simba e ductile iron yakaita kuti zvikwanisike kugadzirisa dhizaini yezvikwiriso uye kudzikisa iwo madhivhuru. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuisa ...
Coupling uye kukanda simbi pombi gungano kuraira
Coupling Lightweight couplings akagadzirirwa mainjiniya kuti ave nechokwadi chekubatana kwakasimba, nekukurumidza uye kuri nyore pakati pemapaipi uye zvigadzirwa. Yakagadzirwa kubva pasimbi isina tsvina ine gasketi rerabha, izvo zvakabatanidzwa zvinoenderana nepombi uye fittings 'isiri-inokanganisa zvivakwa. Mirayiridzo Yekuungana 1. Fita r ...
Nhanganyaya Epoxy cast iron drainage mapaipi inogadzirwa kubva ku100% inogadziriswazve zvinhu, ivo havango gadzikana nharaunda chete, asi zvakare vanogutsa zvivakwa zvakawanda zvinodikanwa kuti utsungirire mamiriro ane hukasha zvese zvemukati nekunze kwepombi uye zvigadzirwa; izvi zvivakwa zvinosanganisira zvakanakisa ...
Grip Collars, Yakabatwa Yakakwira Pressure Coupling, Rubber Kubatanidza
Grip Collars Mvura inonaya pombi masisitimu kana drainage pombi masystem anogona kupinda netsaona pamusoro pekumanikidzwa nekuda kwekuwandisa kana kune kuzadza kwenzvimbo huru yetsvina. Mune chaiwo zvikamu - shanduko yedirection uye gradient, matavi uye plugs-iyo inonamira kuomarara uye pombi basa kudzikama inodaidzira majoini ...
Kuisirwa Mirayiridzo yeFlange kana Fl ...
Kuisirwa Mirayiridzo yeMechanical T ...
Kuisirwa Kuraira Kune Yakasimba & ...
Bhenefiti yeEN877 cast iron pombi uye inokodzera ...